မီသင်စာအုပ်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလင့်ထားသည်ထက္ဖို့ဆက်လက်။ စတင်ကြည့်ရှုခြင်းမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်သင်ဖိုရမ်လို့မရရောက်မှအောက်ပါစာရင်း။ မင်္ဂလာပါအားလုံးလိုအပ်သည့်အာရှ၊ငါမူကားမတှေ့နိုငျအမှန်စာမျက်နှာဒီလိုလုပ်ဖို့။ ဒါဟာတစ်ဦးဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်ပဲအလွ၊ဒါပေမယ့်ငါသာဆိုအင်္ဂလိပ်၊ဂျာမန်နှင့်ရုရှားနှင့်တိုက်ရိုက်ရုရှား၌၊ငါမဟောပြောသင့်ဘာသာစကား(ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ၊ငါသည်အဖတ်မနိုင်)ထို့ကြောင့်မရှိနိုင်မှတ်ပုံတင်အပေါ်သင့်ရဲ့ဆိုဒ်များ။ ဟုတ်ပါတယ်၊အဲဒီမှာနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးအတွင်းမှဆိုဒ်များသည်အင်္ဂလိပ်၊ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုကကပိုင်ဆိုင်ကြသည်အမေရိကန်နှင့်အများဆုံးလက်မခံကြဘူးမှတ်ပုံတင်ခြင်းမှရုရှားလျှင်ပင်၏ရွေးချယ်မှုအာရှအလွန်နိမ့်သည်။ အထူးသဖြင့်၊လူမပြမည်သည့်အကျိုးစီးပွားအတွက်၊ငါသည်မကျင့်တည်းအလုပ်၊အမိ၏အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ကြောင်းကိုသောကြောင့်၊ငါ၏ထံမှရုရှားနှင့်ငါသည်နောက်တဖန်မအလုပ်လုပ်ကိုင်။ လူငယ်များ၊ဒါပေမယ့်လည်းရှိသည်။ ကျွန်တော်ရှာမတွေ့နိုင်မည်သူတစ်စုံတစ်ဦးကအဆက်မပြတ်ရေး၊ပင်အများအတွက်ချစ်ကြည်ရင်းအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ကတည်းကဒါကြောင့်သူဖြစ်ရမည်အပူတပြင်း။ ငါ့နာမကိုမိုက်ကယ်က၊ငါဖြစ်၏ဖရိကလိမ်လည်အဘို့အရှာဖွေနေတစ်ခုတည်းအဖြူအမျိုးသမီးအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ငါတိကိုချစ်ဖို့သင်ကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာသင်ပေးလက်ဆောင်တစ်ခုရေချိုး(ဖြစ်နိုင်ရင်ပိုက်ဆံ)။ ငါပြောချင်သောပထမဦးဆုံးအရာများ၏ဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မယ်ပုံရိပ်ကို၏သားကောင်။ ငါနားမလည်ကြဘူးတိကျသောအကျိုးစီးပွားအချို့လူများတွင်၊ဒါပေမယ့်သင်ကမကောင်းတဲ့အာရှ၊သင်အထူးသဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါမှာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊ငါသေချာပါတယ်။ ငါလျစ်လျူရှုရန်ကြိုးစားသောမှတ်ချက်များငါထံမှလက်ခံရရှိခဲ့ပြီလိုမျိုးတချို့နေရာမှာလည်းပြောနိုင်မှာဗမာ၊ဒါပေမယ့်အားလုံးဤချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များထို့နောက်ဖျက်အရုရှပြီးနောက်လူတစ်ဦးအချိန်ကုန်ခဲ့သည်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားရှိပါတယ်။ သွားရန်ဂျပန်၊ကိုရီးယား၊သို့မဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံ၊သို့မဟုတ်အရာရာရှပွင့်ပြသ၊နှင့်အတူအပိုစတာအကြောင်းပြောပါတယ်၊”အပူတပြင်းနှင့်ဆိုးသောရုရှားအမျိုးသမီးအဘို့အရှာဖွေနေအာရှ၊”ထိုအဖို့မေ့လျော့ကြဘူးကြောင်းဖော်ပြထားသူရဲ့မကောင်းတဲ့အတစ်ခုတည်းမိခင် အဖိုးတန်ပုလဲတနှစ်နာမည်ကိုလျစ်လျူရှုနှင့်သင်မလိုချင်တဲ့အဖြစ်၊လျှင်ကြောင့်အသက်အရွယ်၊ပြည်၊အိမ်ထောင်ရေးအဆင့်အတန်းနှင့်အောင်မြင်နိုင်မည်၊အမည်အချို့အစမှာအာမခံချက်။ အိုးစောင့်၊တောင်မလိုပါဘူးဖို့ဟန်ဆောင်ဖို့အောင်မြင်တဲ့ဖြစ်၊အရမ်းရယ်ရတယ်။ ငါလျစ်လျူရှုရန်ကြိုးစားသောမှတ်ချက်များငါထံမှလက်ခံရရှိခဲ့ပြီလိုမျိုးတချို့နေရာမှာလည်းပြောနိုင်မှာဗမာ၊ဒါပေမယ့်အားလုံးဤချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များထို့နောက်ဖျက်အရုရှပြီးနောက်လူတစ်ဦးရှိပါတယ်အချို့သောအချိန်ကုန်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားရှိပါတယ်။ ငါကြိုက်တတ်တဲ့ကိုကိုးကားဘာဟာကျမ်းစာအကြောင်းအခြားအစမှာ၊အမှုအတွက်သင်ဖယ်ရှားချင်အမျိုးပွါးများ၏သားကောင်ခဲ့ကြသူအားဖြင့်တလွဲအထောက်နောက်ခံ။ ရန်ကြိုးစားနေလျှင်သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားခြင်းအားဖြင့်အရေးအသား မွတ္ခ်က္မ်ားကိုမှားယွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းသင်ပစ်မှတ်ထားနေရာတိုင်းတွင်တူ၊သင်အပေါင်းတို့ဤမိုက်မဲစကားသည်တက်ငါ၏မြို့ရိုး၊ငါဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်အဘယ်သို့အပေါ်ယ့်ကြောင့်ဤမိုက်မဲမွတ္ခ်က္မ်ား၊ အရာ၊ငါကလည်းအဖြစ်၊ငါသည်အလျစ်လျူရှုကတည်းကကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကြောင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ငါတူခံစားသူ၊သာငါ့အခြေအနေ။ လူစေခြင်းငှါထင်ခဲ့ဘယ်တော့မှမ။ ေတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကူညီဖို့အတွက်ငါ့ကိုငါရှာ။ အတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်တရုတ်နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၊ပိုကောင်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရီးယား။ ပြီးလျှင်ဘာမှမရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလိမ္မာပါးနပ်သို့မဟုတ်အသုံးဝင်ကြောင်းပြောဖို့ငါရှာ၊ျပီးေတာ့သင္၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်ရေး-ပိတ်၊ခွေး၊ထားခဲ့ငါချည်။ သူငရဲပေးသည်ၽြန္ုပ္၏လမ်းညွန်သောအခါငါရယ်နီးငါ့ကိုယ်ပိုင်ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်မည်မဟုတ်? ဟေး၊လူတိုင်း၊ငါသည်သင်တို့ကိုလိုအပ်သည့်အာရှအကောင်လေးခဲ့၊ဒါပေမဲ့မနိုင်အရပ်တို့ကိုမလုပ်။ ဒါဟာတစ်ဦးဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်ပဲအလွ၊ဒါပေမယ့်ငါသာဆိုအင်္ဂလိပ်၊ဂျာမန်နှင့်ရုရှား၊ငါအသက်ရှင်သောအတွက်ရုရှားက၊ငါမသိငါ၏ဘာသာစကားကိုပြောဆို(ငါဆိုလိုသောငါဖတ်မနိုင်)၊ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မအတွက်မှတ်ပုံတင်ပြီးထိုင်ခုံ။ ဟုတ်ပါတယ်၊အဲဒီမှာနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးအတွင်းမှဆိုဒ်များသည်အင်္ဂလိပ်၊ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုကကပိုင်ဆိုင်ကြသည်အမေရိကန်ထိုသူတို့၏အများဆုံးမဟုတ် မလက်ခံမှတ်ပုံတင်မှရုရှားလျှင်ပင်၏ရွေးချယ်မှုအာရှအလွန်နိမ့်သည်။ အထူးသဖြင့်လူမပြမည်သည့်အကျိုးစီးပွားအတွက်၊ငါသည်မကျင့်တည်းအလုပ်၊အမိ၏အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ကြောင်းကိုသောကြောင့်၊ငါ၏ထံမှရုရှားနှင့်ငါသည်နောက်တဖန်မအငယ်၊ဒါပေမယ့်ငါဖြစ်၏။ ကျွန်တော်ရှာမတွေ့နိုင်မည်သူတစ်စုံတစ်ဦးကအဆက်မပြတ်ရေး၊ပင်အများအတွက်ချစ်ကြည်ရင်းအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ မင်္ဂလာပါ။ ငါ ပုဂံ၊ပါရွန္(အာရှ)။ ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုသူငယ်ချင်းတွေကနေအခြားကမ္ဘာ။ ကျွန်တော်ကိုယ့်သွားရောက်ကြည့်ရှုမိတ်ဆွေတစ်ဦးအွန်လိုင်း? ရန်ကြိုးစားနေလျှင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားခြင်းအားဖြင့်အရေးအသား မွတ္ခ်က္မ်ားကိုမှားယွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းသင်ပစ်မှတ်ထားနေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပို့အားလုံးဒီမိုက်မဲသောစကားကိုငါ၏မြို့ရိုး၊ငါသွားမယ့်ပြုပြင်ဖို့အဘယ်သို့ရဲ့အပေါ်သွားသောကြောင့်ဤမိုက်မဲသောမှတ်ချက်များ၊ငါကလည်းလိုပဲ၊ငါလျစ်လျူရှုကတည်းကကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါသားကောင်၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ၏အခြေအနေ။ လူထင်စေခြင်းငှါကြောင်းထင်ခဲ့ဘူး။ ေတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကူညီဖို့အတွက်ငါ့ကိုငါရှာ။ သင် ငါအတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်တရုတ်သို့မဟုတ်ဂျပန်၊ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ်ဦးထံမှရီးယား။ ပြီးလျှင်ဘာမှမရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလိမ္မာပါးနပ်သို့မဟုတ်အသုံးဝင်ကြောင်းပြောဖို့ငါရှာ၊ျပီးေတာ့သင္၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်ရေး-ပိတ်၊ခွေး၊ထားခဲ့ငါချည်။ သူငရဲပေးသည်ၽြန္ုပ္၏လမ်းညွန်သောအခါငါရယ်နီးငါ့ကိုယ်ပိုင်ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်မည်မဟုတ်? သင်အတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်တရုတ်သို့မဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံကို။ ပြဿနာမရှိပါဘူး၊ရတာကေျပာ”ညစ်ညူးခြင်း၊ရိုင်းစိုင်းနှင့်အပူတပြင်းရုရှအကင္မ္ခ်ီ။”ငါဆိုသည်ဘယ်တော့မှငါအနီးကပ်သင့်ရဲ့ဝါယာကြိုး၊နိုင်ဘူးလျှင်ပင်ငါအလို။ ငါဂရုမစိုက်ပါဘူးကြောင်းသူ့ချည်၊ငါသာဂရုစိုက်သူ၏သဘောထား။ အများအပြားရှိပါတယ်ရှအရှေ့ရုရှားနေသောသူမရှိ။ အရှာဖွေနေကြိုးစားရုရှားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊ဒါဟာအလွန်အသုံးဝင်၏အခြေအနေ၊သင်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါအခအ။ ကျွန်မအထင်သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အချို့သောကြီးမြတ်ယောက်ျားတွေရှိပါတယ်။ ကျနော်လည်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့စွာကျွန်တော့်အတွက်။ ကံကောင်းပါစေ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်အခတ်များအတွက်အထူးသဖြင့်ကြွလာသည့်အခါအချစ်နဲ့အထူးတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေ။ ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းသွားျဖင့္ဖိုရမ်များဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်၊ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့တက်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားလျှင်ပင်၊မြော်လင့်ခြင်းအရှုံးသောမျှော်လင့်ချက်ကဲ့သို့မီးပုံးပျံ။ ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့၊သို့သော်၊ကိုမမြင်မိပါဘူးနှင့်ချိန်းတွေ့အဖြစ်ရေရှည်ကတိကဝတ်အတွက်မျက်နှာတစ်ထောင်အတားအဆီးများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ။ သူတို့ကပဲအတူလူသစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့မစဉ်းစားအလွန်အကျွံ ပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်ဆက်ဆံရေးအတွက်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အအွန်လိုင်းသွားသည့်အချိန်များအတွက်အထူးအချိန်လေးနှင့်အတူလှပသောသူစိမ်း။ အဘယ်ကြောင့်မ? ကြရရှေ့ဆက်ရွေ့လျားစောင့်ရှောက်ဖို့ကြွလာသောအခါ။ ပာေနရုံသာမကတစ်ဦးအမှု၏အမှန်တကယ်အချိန်။ သာအွန်လိုင်းအစည်းအစဉ်အမြဲတိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊နှင့်လွယ်ရှာတွေ့ဖို့အ စကားလက်ဆုံ၏။ ဒါဟာယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါကြောင်း။ သင်စကားပြောနိုငျစာသားအတိုင်းသင်ကဲ့သို့လမ်းလျှောက်။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းစစ်မှန်သော-အချိန်ဆက်သွယ်ရေးတွေအများကြီးကြာအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးများကြီးပိုမိုလွယ်ကူ။ ပြောပြသင်၏အိမ်နီးချင်းသင်အနည်းငယ်အလုပ်ရှုပ်သည်၊သို့မဟုတ်မတုံ့ပြန်သည့်အခါသင်ရှိသည်အချို့အခမဲ့အချိန်သိရန်အသီးအသီးအခြား။ ဒီအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူ။ မသန္နိဋ္ဌာန်လူများ၊တစ်ခုခုကိုဆောင်ပြေသင့်စကားပြောဆိုသို့။ ထိုကဲ့သို့သောလူ၊အွန်လိုင်းချက်တင်ကဲ့သို့ပုံအပြီးပြည့်စုံသော။ သင်ဂူအချို့စမတ်စုလိုင်းများေပးပါဟာသတစ်ခုခေါင်းစဉ်အပေါ်အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွား၊သို့မဟုတ်ကိုယ့်ပိုမြန်စဉ်းစား။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကိုယ့်တဦးတည်းကနေကြည့်တဲ့တကယ့်လူတစ်ယောက်အကြောင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ၊ဒီပုံပို။ လူသစ်ဖြည့်ဆည်းအွန်လိုင်းနှင့်စတင်ရန်အမည်ညွှန်းရှာတဲ့တကယ့်လူတစ်ယောက်အကြောင်း-သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအားလုံးလိုအပ်ပိုဆောင်းထောက်ခံမှုအပေါ်အချို့သောအကြောင်းအရာများ။ ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဦးလျှင်မလေးမေးသင်အနှောက်အယှက်မေးခွန်းကသီ၏ရာဇပလ္လင်ဂိမ်း၊သင်စွန့်ပစ်နှင့်အတူအကြောင်းတစ်ခုခုသို့မဟုတ်မကူညီနိုငျ။ သင်ရင်ကောင်းမကျအတွက်အိပ်သော၊လူငယ်တစ်ဦးသည်လူ။ ကရင်ဆိုင်ရမယ့်ကြစို့၊ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်ချင်တဲ့သဘောနှင့်ပညာမျက်စိထဲမှာလူတစ်ဦး၏ချစ်။ အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မထိခိုက်စေ။ လျှင်သင်အကြောင်းအရာအကြားဆက်ဆံရေးသည်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်အဖြစ်ကိုကောင်းစွာသင်စဉ်းစား၊သင်ရိုးရှင်းစွာရှောင်ရှားကြပြီး၊ပိတ်ဆို့သို့မဟုတ်ကျေးပြောသောစကားဖြစ်ပါသည်။ နောက်တဖန်အ၊ဒါကြောင့်မလိုအပ်ပါဘူးအများကြီးသတ္တိနှင့်ချက်ချင်းကယ်ဆယ်ရေး၊အစားကျက်တို့သည်ညှိုးမျက်စိအစဉ်အမြဲ။ မှတ်ချက်:ဘူးစားထိုးခြာအားရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်မပြောအွန်လိုင်းဘာမှမအခါ သင်တွေ့ဆုံရန်လူငါးစစ်မှန်သောအသက်ကိုအတွက်ကြောင့်အလွန်နိမ့်နှင့်အအဆုံးသတ်ရေးနည်းလမ်းဆက်ဆံရေးအတူဤ။ အင်တာနက်ကိုလွှတ်ပေးပါ။ များစွာသောလူအမှန်တကယ်အသက်တာ၌ကြောက်နေကြတယ်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးမသိရပါဘူးဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့၏အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ဒါကြောင့်အသုံးျအင်တာနက်ကနေတဆင့်၊သင်အနားယူနိုင်မည့်နှင့်မလူတစ်ဦးအတွက်၊တိုင်တစ်ခုရှိပါတယ်အိမ်ပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားအတွက်။ လူမှုရေးကွန်ရက်များလုပ်ပိုင်ခွင့်။ ဒီေနရာဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းမှာလူ၊နဲ့ရွေးချယ်သင့်သို့မဟုတ်အနီးဆုံးဝိညာဉ်အမွှာ။ အွန်လိုင်းကလူနှင့်တွေ့ဆုံနှင့်တိုးမြှင့်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျိုးလေးစား။ ယနေ့အချိန်တွင်၊များစွာသောလူအဝေမျှစိတ်ဝင်စားသူတို့ရဲ့ဓါတ်ပုံများလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်။ လူတိုင်းအဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေအမည်ညွှန်းတို့တွင်သူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းဓါတ်ပုံ။ ဒါကောင်းတဲ့အရချီးမွမ်းမှမိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်စိမ်း။ ဒီအမှန်တကယ်တိုးပွါးငါတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစား။ အင်တာနက်ကြယ္ၿအနိမိတ်အကြား။ လျှင်သင်တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်၊အသစ်လူတွေဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာ၊သင်ဖြစ်နိုင်သိသည်အဘယ်သို့သဘောအသိုင်းအဝိုင်းသည်၊ လျှင်ပင်ရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ်မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အကြား။ ၊၊ ကို၊နှင့်များစွာသောအခြားအကူယခုရရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီအောင်မြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်နီးကပ်လာပြီဖို့အထူးသဖြင့်လူတစ်ဦး။ မရှိခြင်း၏တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေး။ မည်သည့်အသွင်ဆက်သွယ်ရေး၊အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲအံ့ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်၊အစားထိုးအသက်ရှင်သောစကားပြောဆိုသောစကားအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်စိတ်ခံစားမှု၊မျက်နှာအမူအရာနှင့်အမူအရာ။ ကျနော်တို့အဖြားအတွက်ကျနော်တို့ရဲ့မျှော်မှန်းပြီးနောက်အစည်းအဝေး။ ကံမကောင်းသဖြင့်၊ချက်ဆက်သွယ်ရေး၊အချို့သောဝိသေသလက္ခဏာများ၏အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်အသိအမှတ်ပြုရန်။ ဒီမှာဖြစ်ပါသည်မလွှဲမရှောင်အစိတ်ပျက်စရာအတွက်အကူးအပြောင်းဖို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေး။ ချက်စာပေးစာယူအားဖြင့်၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးစုံလင်ခြင်းရှိစေခြင်းငှါ၊ဒါပေမယ့်နေ့စဉ်အသက်တာ၌၊သူတို့မဖြစ်စေခြင်းငှါသင်၏အမျိုးအစား။ သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးအဘို့ရှာသွင်။ လူအတော်များများဟာအထီးကျန်ခံစားမိသူအင်တာနက်အပေါ်ရုံမတူချိတ်ဆက်ဘဝတော့ဘူး။ အင်တာနက်ကိုကဲ့သို့ပင့်ကူစီး၏။ စွဲနေသောလူတွေကိုဆက်သွယ်လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်။ ဒါကအဆိုးဆုံး။ ဒါကြောင့်၊ကျောကျွန်ုပ်တို့၏မေးခွန်းကို:သင့်ရဲ့အသိပညာ တကယ့်အလုပ်လုပ်ခဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်၊သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အရေးကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အဆိပ်အတောက်နှင့်ထိရောက်မှုမိတ်ဖက်၊အရာအားလုံးကိုဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မည်ကိုငါ။ ရှိရာပေါင်းများစွာနှင့်ပတ်သက်သူတွေတွေ့ကြပြီဟုသူတို့၏ပိုကောင်းတစ်ဝက်ကိုအွန်လိုင်း။ ပြောဆိုရန်၊နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ဆက်သွယ်ဖို့၊ဆုံးဖြတ်ဖို့၊အစီအစဉ်။ ဒါဟာလှပတဲ့အင်တာနက်ဇာတ်လမ်း-အိပ်မက်။ သို့သော်ထိုပြဿနာကိုသင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာသာပြန်ဒီအွန်လိုင်းဝတ္ထုတစ်ခုခုသို့အပြီးအလေးအနက်။ ငါ့မိတ်ဆွေကိုတွေ့တဲ့မိန်းကလေးဂိမ်းအတွက်။ မကြာမီသူမကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့နည်းလမ်းနဲ့ချိန်းတွေ့ခဲ့သည်တွင်။ ပြီးနောက်နီးပါးအနှစ်၏အလှန်အတွေ့အကြုံ၊အလေးဖို့ဆုံးဖြတ်မှပျံသန်းဖို့သူ့နိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံရန်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်စိတ်ပျက်များခဲ့သူတစ်ဦးဤမျှလောက်ငွေနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအခါမိန်းကလေးလည်းသူ့ကိုငြင်းပယ်သောအခါသူကဘယ္အခ်ိန္မွာအသတ်၊မအလူ။ ကျွန်မအထင်သူ့တုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ခဲ့တယ္္။ (အမည်မသိဧည့်)ငါတွေ့ငါ့ခင်ပွန်းမှခရစ်ယာန်ဘေးထွက်ဆိုး။ သူကအသက်လတ်ပိုင်းအရွယ်ယောက်ျားသည်၊အလွန်ချောမော ပြီးဖော်ရွေမှု၊လအနည်းငယ်အကြာတွင်၊သူသည်ဘုရားသည်ငါ့နှလုံးနဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့လှုပ်ရှားသူနှင့်အတူနေသော။ ကျွန်မမယုံကြည်နိုင်ရှိပါတယ်ကဲ့သို့လူမျိုးအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ အဖြစ်ထွက်လှည့်ခဲ့သည်။ (တင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူ-)ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ဒီနှစ်ခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်လမ်းများ၊သင်နားလည်သောအကျိုးရလဒ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားစေနိုင်သည်။ ဆက်လက်လိမ့်မည်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်လိုအပ်သောအကူးအပြောင်းမှအွန်လိုင်းအဆင့်အတန်းကိုမှန်ကန်အသက်တာ? ဒါကြောင့်အကယ်။၊ရွှေ့စေနှင့်လာမည့်အပေါ်ခေါင်းစဉ်။ သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်မိန်းကလေးများတွေ့ဆုံရန်။ အဖြေထက်ပို။ ရှိပါတယ်ကြောင်းအ ဆိုဒ်များကူညီဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သင်၏ပိုကောင်းတစ်ဝက်။ ဤသည်များမှာ:ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊အွန်လိုင်းအုပ်စုချက်တင်တူလူများအတွက်အလားတူအကျိုးစီးပွား၊နှင့်၊ဟုတ်ပါတယ်၊အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအပါအဝင်၊အမည္တူ၊၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှာမည်သည့်အချိန်မှဆုံးဖြတ်ရန်အဘယ်အရာကိုသင်ချင်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကန့်သတ်ရန်။ သင်လိုအပ်အမျိုးသမီးများကိုတွေ့ဆုံရန်? မည်သည့်အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးဖြစ်သင့်လျော်သည်၊ဒါကြောင့်မှာပါဝင်နိုင်ဖြစ်နိုင်ပိုင်၊ နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအခြမ်းနှင့်အရှေ့လူတွေမှာညဉ့်ကိုမလွန်သာယာသော။ အဲဒီအစား၊မေးပါများအတွက်နေ့၏အချိန်အခါဖုန်းဆက်ဖို့အဆင်ပြေသို့မဟုတ်ပို။ သင်သည်အဖြစ်နိုင်အတွက်အစည်းအဝေးဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်နေစဉ်ဆင်းရဲသောသူကိုမိန်းကလေး၊နှင့်အတူသတိပေးချက်များ)။ သင့်ပရိုဖိုင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်အရေးကြီးသတင်း။ သစာမ်က္ႏွာတြင္မှသာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအမည်၊သို့မဟုတ်ထက်မပိုသင့်နောက်ဆုံးအမည်၊ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ခဲယဉ်းနေပါစေသင်ကြိုးစားမှဖမ်းမိန်းကလေးများနှင့်အတူသင့်ရဲ့သတင်းစကားများ၊ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ဖို့တုံ့ပြန်။ အရာအားလုံးကြောင့်တူအတုသို့မဟုတ်အချို့သောသင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အဖို့ဆုံးဖြတ်ကြသူဟာသ။ ထို့ကြောင့်၊ဒါကြောင့်လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်စွက်မးခြန္းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်၊ဒါကြောင့်အားလုံးအဲဒီမလိုအပ်တဲ့မေးခွန်းတွေကပျောက်ကွယ်သွား။ ပဲချရေးအနည်းငယ်အချက်များ:-မြို့၊အသက်အရွယ်၊သင့်အမည်မှန်နှင့်အဆင်၊အတင်ကောင်း။ ဤနိမ့်ဆုံးဖြစ်သင့်သည်အလွယ်တကူသင်သည်သင်၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်။ သင့်ပရိုဖိုင်း(သင့်ရဲ့အသွင်ပုံကိုယ့်ကိုယ်ကို)အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-စကားရပ်။ ဒါကြောင့်သင်၏မျက်နှာကိုဆေးကြောမီကပြသထားတယ်ကြောင့်ကမ္ဘာမှ)။ ပထမဦးဆုံးအရာအားလုံးမိန်းကလေးများသတိပြုမိလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်…
ဂျော်ဒုတိယ၏အစအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကုမ္ပဏီ (ငါလိုလူကို)၊စမိမိရှာပြီးခဲ့သည့်လကရန္ႏွင့္ရှာတွေ့ဖို့အတွက်သင့်လျော်သောခင်ပွန်းအချို့အဘို့အများဆုံးနှစ်လိုဖွယ်ရှိအမျိုးသမီးခေတ်။ သာ ပြည်နယ်၊အမျိုးသမီးများမှာအိမ်ခြံမြေ နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ဖို့ပျက်ကွက်တဲ့သူဖြစ်နေသော်လည်း၊သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ပုံးပျံဘဏ်ကိုဟန်ချက်။ ကျွန်မအထင်တော့ဒါဟာပထမဆုံးအနေနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာထိုကဲ့သို့သောအရာတစုံတခု တစ်ဦးချင်းအစီအစဉ်များအတွက်ကြွယ်ဝသောအမျိုးသမီး၊”။ ဒုတိယကာင္းနေ့စဉ်နန်းယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်းတစ်ဦးအလည်အပတ်မှရှန်ဟိုင်း၊ထိုမြို့သည်ရှာဖွေစူးစမ်းခြင်းအဘို့အလားအလာယောက်ျား။ အစည်းအဝေးကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်၊တရုတ်နိုင်ငံမှနေအိမ်အများအပြားလူဦးရေသန်း။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းက၊ထာင္သူတဦး၏အကြီးဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်၊တရုတ်ဥပဒေကြမ်း ဆိုသူဒေသခံရုပ်သံကုမ္ပဏီအနေနဲ့နှစ်စဉ်အကျိုးအမြတ်အကြောင်းသန်းပေါင်မှ၎င်း၏သန်းပေါင်းများစွာ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများသည်။ သို့သော်နိုင်ငံအတွက်လူသိများအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျားမအချိုးမညီမျှတဲ့အေျသန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့၏ရန်တစ်ခုတည်းအသက်တာ၊အများဆုံးမင်္ဂလာဆောင်အေဂျင်စီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ချစ်၏ဘဝတရုတ်အမျိုးသားများ။ အစိုးရ၏အစကိုဦးစားပေးကူညီပံ့ပိုးရန်အမျိုးသားများအဘို့မိမိတို့ရှာဖွေရေးအတွက်။ နောက်ဆုံးအလုပ္၊သတင်းစာ သတိပေးသောလူမှုသဟဇာတဖြစ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်နိုင်မည်ဟုခြိမ်းခြောက်လျှင်သန်းပေါင်းများစွာလူတွေတိုင်းပြည်ကိုစွန့်ခွာဖို့။ ကျေးလက်နေထိုင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ရှာပါ။ ဒါပေမယ့်တရုတ်ရဲ့စူပါ-ကြွယ်ဝသောအမျိုးသမီးမျက်နှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စိန်ခေါ်မှုများ၊။ ဒုတိယဆိုသည်မဟုတ်၊အနည်းဆုံးအားဖြင့်အချိန်ယူမှရှာတွေ့အလားအလာယောက်ျား။ ဟုတ်ပါတယ်၊သူအလွန်အလုပ်ရှုပ်နေ၊ဒါကြောင့်သူကဘူးကြအချိန်အများကြီးရှာဖို့ပြီးပြည့်စုံသော။ သူကအမြဲအများအားဖြင့်ဝိုင်းရံရှင်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၊ဒါကြောင့်သူငယ်၏အခွင့်အလမ်းရှာဖွေခြင်းကောင်းနေသောယောက်ျားတွေ၏အပြင်ဘက်သူချက်ချင်း။ သူကြွယ်တို့မအပ်ချင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်အောင်မြင်သော။။။။။ သင်ချင်ကောင်းတစ်ဦးဇနီးနှင့်ကောင်းတစ်ဦး၏မိခင်၊သင်မူကား၊မပြုအပ်ချင်ဖြစ်ဖို့အောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးထင်ပါတယ်သောကြောင့်အကျွံအချိန်ဖြုန်းသည်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမဟုတ်သင့်မိသားစုအတွက်။ တချိန်တည်းမှာပင်၊သူဌေးမျိုးသမီးများမြင့်မားစံချိန်စံညွှန်းများရွေးချယ်ခြင်းအတွက်သူတို့ရဲ့ခင်ပွန်း၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်အလွန်အောင်မြင်၊သင်မျှော်လင့်သင်၏ခင်ပွန်းဖြစ်ဖို့အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်မြင်သော။။။။။ ရေဗက္ကခံဳေသူတဦး၏အငယ် ကြွယ်သူဌေးမှပူးပေါင်းစီမံကိန္းဟုဆို လူမှုဓလေ့ကိုလည်းတားဆီးကြွယ်ဝသောအမျိုးသမီးကိုရှာဖွေပြီးပြည့်စုံသောခင်ပွန်း။ ယောက်ျားအများကြီးပိုပြီးအောင်မြင်မှုအတွက်မေတ္တာကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အများကြီးပိုပြီးရွေးချယ်မှုကြောင့်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်တစ်စုံတစ်ဦးမှတစ်ဦးအနိမ့်လူမှုအုပ်စုၿခံဳေ၊အဘယ်သူ၏မိသားစုထိန်းချုပ်မှုအဟိုတယ်နှင့်ဟိုတယ်အင်ပါယာ။ မိန်းမတို့အဘို့၊နီးပါးမဖြစ်နိုင်ရွေးချယ်တစ္ခုကသင့်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကြိုက်မည်မဟုတ်၊သင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်အများအပြားအခက်။ ။ ဒုတိယအမဲလိုက်ခြင်းများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်ဘွဲ့၊အတူပူးေပါင္းေဟာင္ေကာင္ချိန်းတွေ့အေ တွင်ဇွန်လအခါသူကစတင်လက်ခံခြင်းအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းရပ်ရှိသမျှကျော်တရုတ်နှင့်ကမ္ဘာ။ ချိန်းတွေ့ဖို့၊အသုံးချခဲ့ကြတင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသားများအပါအဝင်သြစတြေးလျနှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအပြားကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါ။ ဘွဲ့ရများ၏လူသိများတဲ့ဗြိတိန်တက္ကသိုလ်တွေလည်းလျှောက်ထားသူကေျပာပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့် စတင်မည်ဖြစ်ဇူလိုင်လအတွက်၊အခါစီစဉ်သူများစတင်လာလိမ့်မည်ရှာဖွေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်စစ်ဆေးနေသူတို့၏အနာဂတ်ခင်ပွန်းကအတွင်းတစ်စီးရီး၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစည်းအဝေးနှင့်အတူပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့်ကံဇာ အတွက်မော်စကို ဟိုတယ်အနီး။ တိုတောင်းတဲ့စာရင်းလူမျိုး၏အမည်ဖြစ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်အားလုံးကုန်ကျစရိတ်ပေးဆောင်မှခရီးသွားလာ -သြဂုတ်လ၊တရုတ်နိုင်ငံ၊ညစာအတူအမျိုးသမီးများ၏အားလုံးအသက်အရွယ်အကြားနှင့်။ အဘို့အပြိုင်ဆိုင်မှုအခင်းစားပွဲ၌ပြင်းစွာသောအဖွစျလိမျ့မညျ။ လျှောက်ထားကြပြီရမယ်အနည္းဆံုးပညာေရးအဆင့်နှင့်တူညီသောအသက်အရွယ်သို့မဟုတ်အထက်အသက်အချစ်၊ဆာလောင်မွတ်သိပ်ငါးမနျး။ သူတို့အဘို့အရှာနေကြသည်မဟုတ် ၊ဟု ။ ဒုတိယ၊သူအတွက်မာစတာဘွဲ့အင္ဂ်င္နီယာတက္ကသိုလ်မင်နီဆိုသူကပျော်ရွှင်စွာလက်ထပ်ပြီးနှင့်သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူတို့အဘို့ရှာကြသည်သောသူယောက်ျားတွေအလွန်ရင့်ကျက်၊ဥာဏ်နှင့်ထောက်ခံ၊နှင့်အတူသဘောမျိုးဟာသကနှင့်ကောင်းသောအရသာသဘောပေါက်နားလည်သောသူအသက်နှင့်ရိုးသားကြသည်။ အရသာအတွက်ႏွင့္ ၊အစဉ်အလာတရုတ်လောင်းကစားဂိမ်းလည်းနှစ်လိုဖွယ်၊သူကဆက်ပြောသည်။ ဟာအလွန်လူကြိုက်များသည့်ဖျော်ဖြေမှုအတွက် နှင့် ။ အစိတ်အပိုင်းရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၏။ ရူခံဳေ၊မှာမွေးဖွားခဲ့သူခိုုအဝေးအနောက်တရုတ်နိုင်ငံ၏၊ပြောသောသူ၏စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သင့်ပေါင်းကောင်းသောဖြစ်၊ရက်ရက်ရောရော၊ခိုင်ခံ့စေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်းလိုအပ် အဲခဲ့သည်။ ဖြစ်သင့်သည်အချို့သောစီးပွားရေးအခွန်၊အနည်းဆုံးလူသန်းပေါင်းများစွာ၏ယြမ္ေအတွက်ပုံသေပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကတည်းက၊အားလုံးငါ့သူငယ်ချင်းတွေများအတွက်အလွန်ပိုက်ဆံသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပို။၊နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစည်းစိမ်ဥစ္စာသည်တစ်ရောင်ပြန်ဟပ်ပေါင်းစည်း။ သူရှိရမယ်ကောင်းသောစိတ်ဓာတ်နှင့်ကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့။ လျှောက်ထားရမည်ကိုလည်းပြင်ဆင်ရွှေ့ဖို့ ၊အစာရှောင်-ကြီးထွားလာမြို့အနီးအနား၊ရိုးရှန်ဟိုင်း၊အတွက်လူသိများ၎င်း၏ပန်၊၎င်းအသည်းအသန်အစားအစာနှင့်လေကြောင်းနှင့်မာ္ေတာ္ကား။ အဘို့အသောသူတို့အခေါ်”ကြွယ်”၊ဘယ်မှာနီးပါးလူသန်းပေါင်းများစွာအသက်ရှင်၊ဒီမကောင်းတဲ့နေရာဖွင့်ဖို့။ ကတည်းကဘေဂျင်းစတင်ခဲ့ပြီး”အရှေ့မှအနောက်နိုင်ငံများ”ပျိုးရည်ရွယ်မှာဖွံ့ဖြိုးဆဲအတြင္းတရုတ်နိုင်ငံ၏၊ထိုဒေသရှိအတွေ့အကြုံလျင်အမြန်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၊ ရဲ့စီးပွားခဲ့ပါတယ်။။။အဆိုပါအသစ်ရာစုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြို့လယ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်ရှုပ်ထွေးသောအဖြစ်ဖို့ကဆိုသည်ကြောင်းကမ္ဘာအကြီးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပါရှိသောအဆောက်အဦး၊- ဒါကြောင့်သင့်မှာပွင့်လင်းအဆုံး၏။။။။။ မြေထဲပင်လယ်ပုံစံရှုပ်ထွေးလိမ့်မည်မွကြွားနှစ်ဇိမ်ခံရေပူစမ်းဟိုတယ်များ၊စမ်းစင်တာများ၊အဏ္ဏဝါရပ်နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အတုသဲသောင်ပြင်။ အဆိုအရချမ်းသာစာရင်းကရေးသားပြုစုရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက်ထုတ်ဝေလံုးခ်င္းအိမ္ ၊တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးလူအမည်၌အသက်ရှင် ပြည်နယ်အတွက်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်၊။ ပြည်နယ်ကနေအိမ်မှအကြီးဆုံးလူအရေအတွက်အထဲမှအချမ်းသာဆုံးတရုတ်အတွက်။ ပြီးနောက်စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၊လူအတော်များများအတွက် ဖြစ်လာကြပါပြီအလွန်ကြွယ်ဝသော၊နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၊။ ဒုတိယအလေးပေး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊ အကျော်ကြားဖြစ်ခြင်းများအတွက်အလွန်အဆင်းလှသောအဖြစ်၊အလုပ်ကြိုးစား။
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံ။ အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သောဘော်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်တစ်ဦးတစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံအဘို့အရှာဖွေနေ အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အနည်းငယ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အနေ့စွဲ။ ချိန်းတွေ့စတင်တစ်ဦးတစ်ယောက်သောသူများမှာလောလောဆယ်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ယနေ့ငါတို့နှင့်အတူအခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်တရုတ်စကားပြော။ တရုတ်နိုင်ငံ၏အပြည့်အဝတစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသောသူကဲ့သို့သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေချိန်းတွေ့၊ချိန်းတွေ့၊မင်နှင့်ပျော်စရာ။ ချိန်းတွေ့သူတို့ကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူလုံးဝအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ ဒီနေ့ဖွင့်မှတ်ပုံတင်အခမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်တဲ့တစ်ဦးတစ်ရရှိနိုင်တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက်ဆက်သွယ်မှုအွန်လိုင်းမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လုံးဝအခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ စတင်ချိန်းတွေ့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာယနေ့။ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မမှာအလုပ်နိုက်အိပဲ့အိပဲ့ငါကြိုက်ငါ့အလုပ်ပင်သောအခါငါရယ်အလုပ်မ၊ငါကဲ့သို့စီးဖို့ငါ့ဆိုင်ကယ်ကိုကမ်းခြေ၊တခါတရံတွင်ငါအလိုမှာထိုင်နေအိမ်၊ငါကြိုက်ငါ့အကော်ဖီ၊ငါဆောင်ခဲ့ပြန်ပျော်စရာ၊ဘဝခံစားကျွန်တော်ဆက်ကပ်အပ်နှံဖို့။ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ကကိုယ့်တိုင်းပြည်ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ကျွန်တော်အဟောင်းတွေ-ငါချစ်သဘာဝငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်အမဲလိုက်စခန်းများနှင့်ကျွန်တော်အရမ်းအလုပ်ကြိုးစား အလုပ်သမား။ ငါကဲ့သို့အအကအခုန်စားအညစာစားပွဲချက်ပြုတ်ဖို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ထွက်။ ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့၊သင်သည်အတက်ကြွ ပရိုဖိုင်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာ။ ငါသည်အဘယ်သူမျှမ၊အဘယ်သူမျှမ၊အဘယ်သူမျှမကန်။ အဘယ်သူမျှမ၊အချိန်၊ကျွန်မမပြီးဒေါင်းလုပ်ဆွဲ၊ငါဖို့ကြိုးစားနေတာပါယဉ်ကျေးစွာဖြစ်၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်သင်အရက်စွဲချင်တယ်တရုတ်မိန်းကလေး၊ဟင်သြားဖြည့်ဆည်းဖို့တရုတ်အမျိုးသမီး? ငါလဲမသိဘူးဒီလိုလုပ်ဖို့။ ဒါဟာမခက်ခဲသည်၊ သင်သည်အဘယ်သို့ထင်ကြဘူး? တကယ်တော့၊အဲဒီနည်းလမ်းတွေဖြည့်ဆည်းဖို့လှပတဲ့တရုတ်အမျိုးသမီးနေသောသင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာ။ ရဲ့တစ်ဦးကြည့်ကြရမှာတချို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတချို့ကိုတွေ့ဆုံရခြင်း၏ဤထူးခြားသောအႀတွင်းလမ်းလျှောက်အကွာအဝေးသူတို့ရဲ့ဇာတိမြို့။ ရွေးချယ်စရာတစ်ခု:အရက်စွဲ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်အပေါ်တရုတ်လေကြောင်းပျံသန်း။ လာမယ့်အချိန်သင်သွားဖို့တရုတ်လေကြောင်းနှင့်ဘုတ်အသေချာစေရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအဆိုပါလေယာဉ်အမှုထမ်း။ တစ်ခါတုန်းကတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်(သူမညာဘက်တစျ)။ ကျွန်မသူမကိုစတွေ့မှာဟိုတယ်ရှိရာအဆိုပါလေယာဉ်အမှုထမ်းခဲ့သည်တူးပေါက်တစ်ပေါက်လျှင်လိုအပ်နေည။ ကြည့်ရှုများအတွက်ဟိုတယ်မှာဒီလေယာဉ်အမှုထမ်းနေမယ်ဆိုရင်သင်လိုအပ်ညဉ့်သုံးဖြုန်းဖို့အတွက်သင့်ရဲ့မြို့။ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခု:အဆိုပါဘွဲ့အတွက်ကျောင်း။ အများစုကတရုတ်ကျောင်းသားများတက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များတွင်ပါဝင်ဘွဲ့ရအစီအစဉ်အတွက်အင်ဂျင်နီယာနှင့်သိပ္ပံ။ ရောက်သင့်ဒေသခံတက္ကသိုလ်(မသင့်ဒေသခံတက္ကသိုလ်)နှင့် လံုးတရုတ်မိန်းကလေးများတစ်ဦးရှိသည်သောသူဒေါက်တာဘွဲ့အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ်ဇီဝဓာတုဗေဒ။ ရွေးချယ်စရာသုံး:အင်တာနက်။ ဤသည်အထင်ရှားဆုံးချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်အချို့ပုံစံခရီးသွားလာမှုမှာအချို့သောအမှတ်။ ကြိုးစား။ တရုတ်အချစ်တစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ဆိုဒ်ကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အတူချိတ်ဆက်ဖို့တရုတ်အမျိုးသမီး။ သတိရသောအမျိုးသမီးများစွာအတွက်တရုတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပြောဆိုရန်အင်္ဂလိပ်၊ဒါကြောင့်သင်အသင့်ဖြစ်နှင့်အတူလူနာ။ စတုတ္ထလေး:ရွန္ဂ။ တိုင်းအတွက်အဓိကမြို့တော်တစ်ခုရှိပါတယ်”တရုတ်”သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာတရုတ်အမျိုးသမီးလူနေမှုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌။ ကြိုးစားသောစားသောက်ဆိုင်နဲ့ကလပ်အသင်းအတွက်ဤဒေသ၏တရုတ်အဖြစ်၊ဤသည်မြေဧရိယာများအတွက်။ အမျိုးသမီးများစွာအတွက်တရုတ်နိုင်ငံအမှန်တကယ်လှပစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အလွန်အာရုံစိုက်အပေါ်၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်မိသားစုနှင့်။ သင်တို့သည်အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တရုတ်အမျိုးသမီး၏အသက်တာအတွက်။
ငါအမျိုးမျိုး၏စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ငါပြောတဲ့ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးအတွက်၊ငါသည်ကောင်းစွာပညာတတ်၊ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားနှစ်ခုစလုံးအတွက်ဝိညာဉ်ရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်အနုပညာနှင့်အခြေခံကမျြး။ အရပ်ရှည်ရှည်ပါးလွှာ၊ငါအယာကျွန်တော်ဟာအိန္ဒိယကနေဒါပေမယ့်ကျက်ကလေးရယ်အပြည်နယ်များ၏ ငါတန်းအဘယ်မှာငါအချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအကြောင်းပြောနေတာကျွန်တော်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံ၊ငါပိုပြီးသူငယ်ချင်းတွေပေါ့အလုပ္သင္အတာပါ။ ငါလေ့လာဒဿမှာကျမ်းတကၠတိရစ္ဆာန်ရုံတွင်ဘာလင်သည်။ ပုံမှန်၊အမြင့်နှင့်အသွင်အပြင်။ ငါအဘို့အရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနိုင်သူတစ်ဦးနှင့်အတူအသက်ရှင်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံပြီးနောက်ဘွဲ့။ ငါကလည်းအသက်ရှင်နှင့်အတူသင်၏
အဘို့ရှာကြသည်လျှင်အခမဲ့တရုတ်စကားပြော။ အခမဲ့တက္ကသိုလ်ကိုတရုတ်ကျောင်းသားစကားပြောမပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းတရုတ်စကားပြောအင်္ဂါနားလည်ရန်လွယ်ကူသောနှင့်အသုံးပြုမှုင့်၊ရှာဖွေတွေ့ရှိကြီးမားသောအရေအတွက်လူငယ်များ၏နှင့်အဘယ်သူသည်လူအကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ ပူးပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တရုတ်စကားပြောအခုအာကာသမပါဘဲအကြံပေးချက်များရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အစစ်အမှန်ခြစ်။ ကျနော်တို့အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူ၊လူအများစုကနေကိုဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်ရှာဖွေနေမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့။ ဒါဟာဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်နှင့်ချိန်းတွေ့စတင်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊သစ်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်၊တစ်ဦးပရိုဖိုင်ကို၊မက်ဆေ့ခ်ျများ၊သို့မဟုတ်အသစ်မိတ်ဖက်။ မပူဇော်ချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်တွေ၊ငါတို့မူကား၊ပြုပါရန်ကြိုးစားသောသေချာအောင်သင်ချိန်းတွေ့စတင်။ တရုတ်စကားပြောခန်းများအစည်းအဝေးရာအရပ်မှလူများ၏အပြင်ဘက်။ ဒါဟာအစတစ်နေရာမျှဝေဖို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် နည်းလမ်းအားဖြင့်နားလည်မှုအခင်း၊သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသက်တာ၏သွားရာလမ်း။ ဒါဟာနေရာအရပ်ဘယ်မှာသင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်၊အတွေ့နှင့်အတူလူတွေတူညီသောအကျိုးစီးပွား။ တွေ့ဆုံရန်အလားတူမှလူအမျိုးမျိုးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေရာများမှာတရုတ်နှင့်အရတွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းအသစ်။ ဖြည့်စွက်အခြားထူးဆန်းတဦးတည်းသင်ဖူးဘူး။ အသစ်အဖွဲ့ဝင်။ ပူဇော်သင့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့ဖို့အနီ့အဖြစ်၊ဒါကြောင့်မခက်ခဲသည်လူအများစုပြောဖို့အနီ့။ အားဖြင့်နှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်းအနီ့၊သင်ရှင်းလင်းစွာနားလည်ရှုပ်ထွေးထွေး၏ဘဝ၊ထိုကဲ့သို့သောသုတေသနမပါဘဲအစဉ်အလာအဖြေကနေတစ်ယောက်ယောက်ထက်အခြားတဦးတည်းသင်ယခုရှိသည်။ ကျနော်တို့ င္ရှာဖွေတွေ့ရှိဝန်ဆောင်မှုသူတို့ဘယ်မှာရှာတွေ့၊ ပရိုဖိုင်းနှင့်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချက်တင်အစားထိုးများအတွက်အကောင်းဆုံးပွဲ။ ကျနော်တို့အတူသင်တို့ပေးသွားမှာပါလုံးဝအခမဲ့သုံးစွဲခွင့်အသစ်အတည်ပြုလိုက်ချင်းလူငယ်အမျိုးသမီးနှင့်လူမျိုးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်။ ရှာကြသည်သောသူတို့အပူနှင့်အတူ။ ဒါသဘာဝအလျောက်အတူအလုပ်လုပ်ရန် တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအလားတူအကျိုးစီးပွား။ တရုတ်စကားပြောသည့်နိုင်ငံတကာစကားပြောခန်းဘယ်မှာသင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာပါ။ အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်အလုံးအသုံးပြုသူများအတွက်။ အဘယ်သူမျှမအဖြဲတွင်၊မှတ်ပုံတင်၊သို့မဟုတ်စကားပြောမှတ်တမ်း-တွင်။ ပေါ့ပေါ့စကားပြောဆို။ အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်း။ ကျပန်းချက်တင်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားအဖြစ်အွန်လိုင်းဧည့်သည်အတွက်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိက၊အမည်မသိနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ချက်တင်။ ယူတစ်ခုအကျိုးစီးပွားအတွက်တရုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်အကွောငျး စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရှာကြသူတွေအဒိသူတို့ရဲ့စံပြခန့်မှန်းအုပ်စုတဆင့်အိမ်၊ချိန်းတွေ့နှင့်အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်။ ပူးပေါင်းတရုတ် ဖို့စီစဉ်ရက်စွဲများကိုရှာဖွေသင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောအဖော်။ သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချက်တင်ဆိုက်သောအများစုအတွက်အနီးအနားနေရာများများမှာတရုတ်တစ်ဦးတစ်ရှာဖွေနေများအတွက်ဆက်သွယ်မှုများဖြစ်လာ ပင္ဆင္ခ်က္ေ။ ရစိတ်ဝင်စားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းစကားပြောဆိုက်အကြား ရှာနေစတင်ချင်သောသူတို့အဘို့အသုိက္အပြီးပြည့်စုံသောအစုအားဖြင့်အိမ်ချိန်းတွေ့၊ ချိန်းတွေ့နှင့်အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်။ ပူးပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းအတွက်ကိုက်ညီဖို့၊ရက်စွဲတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးရှာဖွေသင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောအဖော်။ အကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းချက်တင်ဆိုက်ဒီဇိုင်းအတွက်အဓိကအားတစ်ခုတည်းကိုရှာဖွေနေလူတွေကိုဆက်သွယ်မှုများအတွက်အနီးအနားသို့လှည့် ပင္ဆင္ခ်က္ေ။
မည်သူမဆိုမေး-အမည်သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပေါ်မြင်နိုင်ရှာဖန်မွန္တင္ခံု:ငါသတင္းေလေ့ရှိပါတယ်:သူမ(တီ)အမှန်တကယ်ရှိသည်။ နီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ကသိသာ၊ အတုက၊သူလိုအပ်နေပါသည်တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာမုတ်ဆိတ်ရိတ်။ ခွန်၊ငါရွပ္အက်ၤ။ ရောဘတ်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုဖျက်ပစ်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်ပြုပြင်၊နှင့်သူ၏ကိုယ်ရေးဓာတ်ပုံကိုပယ်ဖျက်ခဲ့သည်၊တီနေဆဲရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ကိုယ်ရေးဓာတ်ပုံသည်ဖျက်လည်း(ကျေးဇူးဘုရား။): အလို၊ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီကိုယ့်နှင့်အတူတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောလူစိမ်း၊ငါဆိုလိုတာသံုးေဖျားနာ၊ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်ရယ်စရာ:အကြောင်းပြောဆိုမထားဘူးကွန်ယက်မဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့ ကြည် သို့မဟုတ်အခြားသူများနောက်။ လျှင်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အမှန်မိန်းကလေးနှင့်အတူ။ သင်သည်ပို့စ်အမည္:စကားမစပ်၊ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ဘဝပျက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်နှင့်များစွာသောအသက်အနှစ်နှင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်အမျိုးသမီးအတွက်မိမိအနာဂတ်။ ခြွင်းချက်၊။ ကောင်းစွာ၊အကြင်ထားအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့သတင်းအချက်အလက်အတုဆးခ်က္အအမင္သူမ်ားဖို့စတင်နှင့်အတူမှလွဲ။၊သူတို့သည်အသုံးပြုရန်၎င်းတို့၏အီးမေးလ်နာမည်ပေးပို့ရန်ကျပန်း။ သူထိုက်တန်တစ်ဦးအမြန်ရိုက်ပုတ်အပေါ်အဝတ်အဘို့ဘဲ။ သူကတောလျော့ ။ မင်းရယ်ရတယ်သူဖတ္လိုက္ရင္ကြွေမိန်းကလေးဖြစ်ရမည်သူတစ်ဦးကပြောပါတယ် သူတွေအများကြီးပြောဖို့အတွက်အခန်းတစ်ခန်းလျှင်သူသည်အနည်းငယ်စုတ်တိုဆုံး။ အသူစေဘဲနောက်သို့၊”သူတို့တွေဟာသင့်ရဲ့အံသွား။ အရြိင်း၌ငါ့ကိုဝင်တိုက်။ ကောင်းစွာ၊ဖွင့်မြန်မြန်နှင့်အတူတံခါးဝ။ မယူလူတွေအတွက်အရမ်းအလျင်အမြန်ပြုပါ?”ဟုတ်၊အလေး၊ဒါကြောင့်ငါ့ကိုအဖွင့်။ မကြည့်မရှုတော့အံ့။ ကျွန်တော်အစိုးရိမ်မင္သူမ်ား။ ရဟန်းသင်သည်လာသောလောကသို့၊သင်သိလား။ အခုတော့ဖြစ်နိုင်မယ့်လည်းကောင်း၊ပြသၽြန္ုပ္၏။ ငါသူရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါမည်သည့်ရယ်စရာကဲ့သင်တို့အဘို့။ ဒါပေမယ့်အကယ်၍သင်သည်သူ့ကိုမြင်လျှင်နှင့်ဤလွန်း။။။ကကလေးစောင့်ရှောက်? အရမ်းရယ်ရတယ်:ဤသည်အကြီးမားဆုံးအရာငါအစဉ်အမြဲမြင်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ပြီးခဲ့ပြီးပြီဒီနေရာမှာတော့အထက်အများဆုံး။ ငါပဲငါမေသက်ရှင်သေးမြင်ဖို့တကယ်တူလှပါတယ်ဆိုတဲ့လင့်များကမ္ဘာပေါ်တွင်အပေါ်ကျယ်ပြန့်သောဝဘ်အကြောင်းသင်အကြိုက်ဆုံးအသားမပါဘူး ။ ဒီနေရာမှာငါ့အမိ။ ဖြစ်နိုင်တဲ့အနက္ေရာင္လူနှင့်တစ်မိကျောင်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခုရအထောက်အပံ့၊ဒီတော့ကျွန်တော်မသေချာလျှင်ကောင်းတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကူး။ ငါကြိုက်အဘယျသို့လူတိုင်းသည်ကပြောပါတယ်:”သင်သတ်ငှက်အကြောင်း စုတ်အ ၊အကြင်ပြုကဖြစ်နိုင်ရုံချွတ်ယူ၏မြွေရိက္ခာ။”အဲဒီမြွေစားတွေရဲ့အသိသူတို့မှန်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအလေးမဝယ်လိမ့်မည်သင်အိမ်တအိမ်၊အားလပ်ရက်အပေါ်သွား၊နှင့်အပိုလေးတွေပါ။ အခြားကောင်လေးအမည်သူ့ကိုမပေး။ ကြီးမြတ်။ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်ရောဂါများ၊ဒေ၊မကောင်းတဲ့အကြွေး၊မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ရဲတပ်ဖွဲ့၏အာရုံစူးစိုက်မှု၊မလိုချင်တဲ့အသား၊ရိုက်နှက်။ အဘယ်ကြောင့် ပြင်သစ်အထင်ဒါဟာထက်သာ။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့ထက်သာ။ သူကအက်းေမင္သူမ်ား။ မထွက်စာလုံးပေါင်းကြောင်းသင်ရှေ့နေတစ်၊သင်အရူးလျှင်သင်ထင်ကြောင်းချာချာချာရိုက်ခံရနိုင်တက်အားဖြင့်ဗီဒီယိုအသံုးျပဳသူမ်ား၏။ နေသမျှကာလပတ်လုံးမင့္ရွင္ဘုရင္မ်ား၊ဒါကြောင့်သူ့ကိုဖွင့်။ ရယ်ရတယ်။ ငါပြောကိုမုန်းသောနားလေးကြလေ့ရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ဒီအဖြစ်ပျက်သမျှသောအချိန်အတွက်။ ပုံခဲ့သောမြွေနေထိုင်ခဲ့၊မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောဆန္ဒကို။ သွားပွေ့တစ်စုတ်ပင်ရအောင်မင်းကအားလုံးကိုသင့်နှင့်အတူတက်မြင်းမူ။ ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ကိုယ့်စည်းရုံးရေးစတင်တိရစ္ဆာန်အရက်စက်မှု၊ကိုယ့်အမှုအတွက်ကျွန်တော်ထင်သည်၊ အဲဒီလိုပဲအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မလိုအပ်ပါဘူးရှေ့နေ။ အ ပည္သူေ။ ပေမယ့်သူ့ရဲ့နောက်ထပ်လှည့်ကွက်၊သူကြိုးစားသင့်သောမြွေနှင့်မည်မျှတွေ့မြင် ရရှိသွားတဲ့။ ဦးသိတယ်မဟုတ်ပဲတိရစ္ဆာန်အရက်စက်မှုကြောင့်ငါဘောလုံးကိုရှိသည်ပိုင္သြန္းကဲ့သို့သောဗီဒီယိုထဲမှာ၊ငါသည်မရကြဘူးကိုနို့တိုက်ကျွေးမှုအတွက်အသက်ရှင်သောငှက်ကိုကြွက်:အသာနာနှင့်ရယ်စရာမရာ၌အဆိုပါဗီဒီယိုသည်ဤနှစ်ဦးမိန်းကလေးငယ်များမယူကြဘူးအဖုံးချွတ်အကယ်၍အပြစ်မဲ့သောတိရစ္ဆာန်အ။ အမောက်သည်ဣသရေရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအမေရိကန်နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်နှင့်အတူအကြမ်းဖက်ဝါဒ။ အမေရိကန်တွေကိုလည်းမမိုက်မဲမစွပ်မည်သူမဆိုအကြမ်းဖက်ဝါဒ၏၊သူတို့ပြောတာမဟုတ်လျှင်သူတို့မှအချို့တိုင်းပြည်ကသူတို့တွေမကြားရသေး၏။ ဤသည်၏ကြောက်:မိန်းကလေးငယ်များ၊တစ်နာရီအတွက်သင်ရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအတွက်တခု၊အတွက်တခုပင်လျှင်သင့်အားနည်းချက်များနေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသေချာဘူးကျွန်တော်ကြိုက် ။ လို ။ သူမငါ့ကိုဖန်ဆင်းခတ်မှာသူမ၏ကြက်။
လအနည်းငယ်အကြာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်သွားရန်အစည်းအဝေးတွင်ကနေဒါ။ ခဏတစ်ဖြုတ်ပြီးနောက်၊အကြိမ်ကျွန်ုပ်တို့၏အစည်းအဝေးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းပြန့်နှံ့။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊အနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်။ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အအေးဆုံးစုံတွဲ။ ကျေးဇူးသင်တို့အဘို့အချိန်းတွေ့တရုတ်အွန်လိုင်းကိုအပျော်ရွှင်ဆုံးအမျိုးသမီးအတွက်။ ငါဒီမှာသူတစ်ဦးကိုတွေ့ရှိဖို့ပြောနိုင်ပါတယ်၊အကြောင်းသင်ယူကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှု၊ဒါပေမယ့်ကောင်းသောအရာကလာသောအခါသင်အနည်းဆုံးမျှော်လင့်ထား။ ကျနော်တို့မေတ္တာ၌ကျဆင်းပြီးနောက်အချို့စကားလက်ဆုံ။ ပြီးနောက်၊ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ပြောဆိုနာရီပေါင်းများစွာနေ့တိုင်း။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲကြီးမြတ်ကြောင်းဓာတုဗေဒရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်အလွန်မှပူးတွဲတစ်ဦးချင်းစီကတခြား။ ငါအကုန်တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်များအတွက်ဗြိတိန်နှင့်ကျနော်တို့ဟာအလွန်ကြီးစွာသောအချိန်။ အခုကျနော်တို့အပေါ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အဇာနှင့်မင်္ဂလာဆောင်အစီအစဉ်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊အရာအားလုံးကိုချိန်းတွေ့တရုတ်အွန်လိုင်းကချိန်းတွေ့တရုတ်အွန်လိုင်းအကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နှင့်အတူရေအိုင်ဒီယာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော့်စံပြမိတ်ဖက်။ ပြီးနောက်အနည်းငယ်မှားယွင်းသောစတင်သည်၊ငါသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စကားပြောဖို့တစ်ဦးကအဆင်းလှသောမိန်းမငယ်ထဲကနေ။ ပြီးနောက်လအနည်းငယ်၏စာပေးစာတွေ့တော့၊ဇန်နဝါရီလ၌ငါလက်ထပ်၊အဘယ်သူသည်ယခုဏာန္းငါ့အချိန်အကြားတရုတ်နိုင်ငံနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်၊ နေစဉ်သူမသိလုံလောက်ဗမာကိုလာတဲ့ဗီဇာနှင့်အတူအသက်ရှင်စဉ်အမြဲ။ ငါကြိုးစားခဲ့ကြအပြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်ငါ့အချိန်နှင့်တရုတ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အမြားဆုံးရိုးသားပြီးရိုးရှင်းတဲ့ဆိုဒ်များငါတွေ့ပြီ။ သိသိသာသာ၊ငါကံကောင်းခဲ့ပါတယ်နှင့်အချိန်မှန်မှန်ကန်ကန်အရာအားလုံးကို၊ဒါပေမယ့်မပျော်ရွှင်ခဲ့ကြ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၏တစ်ဦးအဖြစ်ဦးဆောင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့ဆိုဒ်များချိန်းတွေ့လှပတဲ့တရုတ်အမျိုးသမီး၊ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တရုတ်တစ်ဦးတစ်ဂိမ်းကစားသူတို့ရဲ့ဂိမ်းအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်အလေးအနက်တရုတ်ချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်ဆံရေး၊သူတို့ကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အပေါ်တရုတ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်တွေရှိကောက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ခုတည်းတရုတ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။